You are at:Home»NHAU DZEDZIDZO»vakatsvunha shona◆ Tinotenda kwayedza: Shumba
By Munyori weKwayedza on	 February 9, 2018 · NHAU DZEDZIDZO
MUKURU wezvedzidzo kuManicaland, VaEdward Shumba, vanotenda bepanhau reKwayedza nekubatsira kwariri kuita vana pazvidzidzo zveShona muzvikoro, izvo zvakaona vadzidzi vemudunhu ravo vachibudirira zvinodadisa nechikamu che97,7% pabvunzo dzeA-Level dzegore rapera.
Muhurukuro, VaShumba vanoti budiriro iyi yakavepo nekushanda nesimba kwevadzidzi, varairidzi nevakuru vezvikoro.
“Kupasa kwevana vedu muManicaland zviri kubva mukushanda nesimba kwevadzidzisi, vana, vabereki uye nebepanhau reKwayedza iro vana vanodzidza zvakawanda kubva mariri,” vanodaro.
VaShumba vanoenderera mberi vachiti, “Vana vakapasa Shona nechikamu che97,7% paA-Level muzvikoro zvose zvemuManicaland. Vadzidzi vanosvika 170 vaiva nemaA kuShona uye izvi zvinoratidza kuve nemoyo pabasa kwevadzidzi.”
VaShumba vanoti vana vakanyora bvunzo dzeGrade 7 dzegore rapera mudunhu ravo vakapasawo zvinodadisa.
“Tichitarisa zvakare bvunzo dzeGrade 7 dzeShona, tine vana vakapasa nechikamu che84,69%. Vana vakabuda nema1 point pabvunzo dzeGrade 7 dzeShona apo vanasikana vaive 1 062 uye vakomana vari 709.”
VaShumba vanoti bepanhau reKwayedza riri kubatsira zvikuru pakudzidza kwevana mutauro werurimi rwaamai weShona.
“Kwayedza inotibatsira zvakanyanya kuvana vedu vechikoro kubvira gwaro reGrade 7, O-Level neA-Level paShona. Mubepanhau iri mune ongororo yenhetembo nemabhuku anonyorwa nevana pabvunzo uye rinodzidzisa kunyora chiShona chakanaka,” vanodaro VaShumba.
Vanoti gore negore vanofamba muzvikoro zvinenge zviine vana vasina kubuda zvakanaka mubvunzo dzeGrade 7 kusvika A-Level vachinzwa zvikonzero zvinenge zvaita kuti vana vakundikane vobva vatora matanho ekuzvigadzirisa.
VaShumba vanoti kubudirira kwevana mubvunzo zvinoda mushandirapamwe wevadzidzisi, vakuru vezvikoro nevabereki.
“Tose tine basa, vana ava ndivo vatungamiri vemangwana naizvozvo ngativapei kodzero yedzidzo. Ndinoda kutenda kubva kuvabereki mukutibatsira pamwe nevadzidzisi nevakuru vezvikoro mukushanda nesimba pamwe nemoyo pabasa.”
VaShumba vanoti chidzidzo cheShona chinofanira kukosheswa muzvikoro.
“Chidzidzo cheShona tinochikoshesa zvikuru, chinodzidzisa zvakare tsika, hunhu nemagariro evanhu vechitema zvinova zvinotibatsira kuumba hunhu hwevana vechikoro.
“Ndinokurudzira zvakare vana vechikoro kuti vakoshese chidzidzo ichi nekuti dzimwe nyika vanotonyora bvunzo dzakasiyana nemutauro wavo,” vanodaro.